Ururka Svenskt Friluftsliv waxay sameeyeen filimo ku saabsan xuquuqda tamashlaynta. Filimadan waa af Iswiidhish oo leh qoraalo hoose oo ah af Iswiidhish, af Carabi iyo af Ingiriisi.
Daawo filimo ku saabsan xuquuqda tamashlaynta oo ka yimi Svenskt Friluftsliv.
Miyaad soo guran doontaa barkimo waraabe?
Waxaa jira barkimo waraabe badan oo sun ah gudaha Iswiidhan. Qaar ka mid ah kuwaas ayaa lahaan kara muuqaal u eeg barimo waraabaha aad ku cuni karto dalalka kale. Haddii aanad caado u lahayn gurashada barkimo waraabaha gudaha Iswiidhan waxaa fiican inaad bilowdo inaad gurato noocyo kooban. Baro dhowr nooc oo ah barkimo waraabaha aad si fudud u garanayso, si aad u hubsato inaad guratay barkimo waraabe sax ah.
Dheeraad ku saabsan barkimo waraabayaasha sunta ah ee Iswidhishka ka akhri bogga intarnatka ee Xarunta macluumaadka sunta. Buugan yar waxa lagu heli karaa 29 luqadood.